आयो खुसीको खबर : साउन १ देखि लामो दूरीमा गाडी चलाउन दिने तयारी तर अझै खोल्न नपाउने भए यस्ता ब्यवसायहरु – List Khabar
Home / समाचार / आयो खुसीको खबर : साउन १ देखि लामो दूरीमा गाडी चलाउन दिने तयारी तर अझै खोल्न नपाउने भए यस्ता ब्यवसायहरु
admin July 14, 2021 समाचार Leaveacomment 161 Views
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन चल्न दिने निर्णय गरेको छ । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका डा. युवराज खतिवडाले बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कोभिड–१९ का सन्दर्भमा थप निर्णय गरेको भन्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।
त्यसक्रममा उनले काठमाडौ उपत्यकामा सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सार्वजनिक सवारी साधन संचालन गर्ने निर्णय गरेको जनाकारी गराएका हुन् । उपत्यकाबाहिर पनि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाउने गरी सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
उपत्यकामा तीन जिल्लाभित्र तथा उपत्यका बाहिर जिल्लाभित्र मात्र सार्वजनिक यातायात चलाउने दिने निर्णय सरकारले गरेको हो। त्यस्तै ट्याक्सीमा चालकबाहेक दुई जनासम्म यात्रु बोक्न पाउने गरी सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
कोरोना संक्रमण जोखिम कायमै रहेकाले तत्काल विद्यालय भने सञ्चालन गर्न नदिने बताइएको छ । उपत्यकाभित्र सबै प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधन भने चल्न दिइरहेको छ। उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा भोली सकिदैछ ।
सार्वजनिक यातायात तथा ट्याक्सी सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने पनि मन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिए। सार्वजनिक सवारी चलाउँदा सिट क्षमताभन्दा आधा मात्र यात्रु राख्न पाइने र यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । क्षमताभन्दा आधा मात्र यात्रु बोक्न पाउने भएकाले सञ्चालन खर्च जुटाउन तोकेको भन्दा ५० प्रतिशतसम्म बढी भाडा लिन पाउने पनि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
Previous नेपाली सेनाका एक सिपालीले आफैँलाई…..
Next देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै फरार रहेका कांग्रेस उपसभापति विजय गच्छदार विशेष अदालतमा हाजिर